Q बुलिमिया वा धेरै खाई बान्ता हुने के हो ? त्यसका कारणहरू के- के हुन् ?
यो खाने विकारको एउटा प्रकार हो । बुलिमिया भएको व्यक्तिले छोटो समयमा धेरै खानेकुरा खान्छ र त्यसपछि तौल नबढोस् भनेर खानाहरुबाट मुक्ति पाउन बान्ता गरेर वा पचाउने र दिशा नरम पार्ने औषधीको सहयोगबाट प्रयास गर्दछ । यस रोगको कारणहरूमा निम्न कुराहरु समावेश हुन्छन् - पारिवारिक इतिहास, कुनै मानसिक रोग वा तनाव, सांस्कृतिक कारक आदि ।
Q सोया र थाइराइड स्वास्थ्यको बारेमा के छ ?
उपलब्ध भएका अनुसन्धानले सोयाले तपाईंको थाइराइड प्रकार्य, विशेषगरी सामान्य थाइराइड भएका ती व्यक्तिहरूलाई असर गर्दैन भनेर देखाएको छैन । हाल थाइराइड समस्या भइरहेका मानिसहरु र आफ्नो थाइराइडका लागि औषधीहरू लिइरहेका मानिसहरुले यसलाई छोड्नै पर्छ वा अन्तरालपछि उपभोग गर्नु पर्छ । यसको कारण भनेको, सोयाले औषधिको अवशोषण दरलाई जी.आई. इकाईमा असर गर्न सक्दछ ।
Q म २३ वर्षको जवान केटा हुँ । एउटा पार्कमा मलाई एउटा ७ वर्षको सानो छोरो भएको महिलाले उनीसँग यौन सम्बन्ध राख्न भनिन् । मलाई लाग्छ कि उनी वैवाहिक जीवनसँग खुशी छैनन् । मलाई लाग्छ म अगाडी बढ्नु र उनको साथमा यौन सम्बन्ध राख्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा यौन सम्बन्ध राख्दा कस्तो कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ ?